Soomaaliland: Jaah Wareerka Baarlamaanka iyo Doorashada Madaxwaynaha | Somaliwayn	Home
Monday, January 2nd, 2017 | Posted by Nuur | 492 views	Soomaaliland: Jaah Wareerka Baarlamaanka iyo Doorashada Madaxwaynaha
Baaralamaanada aduunka waa la doo daa, dooduna way kulalaataa, laakiin qaylada iyo daanyeeraynta baarlamaanka Soomaaliland waa mid aan laga filayn ragii loo xilsaaray inay diinteena iyo dhaqanakeena suuban ilaaliyaan. Bal akhristoow indhahaaga ku daawo: https://youtu.be/gHFhjYOXaS4?t=152
Raga qaarkood shiidkii ay xaafadaha ku hayeen yaraantoodii ayay Baarlamaankii lasoo galeen(walee waano dhalan baa ka adag). Qaarkalena waxy doorbideen waqaaq iyo daanyeerayn amakaag iyo fajac ku riday dadkii daawaday.
Waxaa xusid mudan haweenkii baarlamaanka ka mid ahaa oo ay kaamaradu qabanayso iyagoo afka gacanta saaray yaaba iyo ama kaag awgeed, oo laga yaabo inay is waydiinayaan, “Waar ma waxan baanu ubad udhalnay? Ma waxanbaa wadankii lagu aaminay? Ma kuwan baanu leenahay ubadkayaga ha ku daydeen?” Odayaashii dhaqanka ee dadka kala ilaalin jiray ayaa maanta iyagii lakala hayaa. Markaa akhristoo faa iidada Baarlamaanku keenay waa maxay? Raga qaar waxaa iswaydiiyay miyaan dhimirkooda la eegin intaanay Baarlamaanka lagu darin?
Ragan laba diblaha loo kala hayo maanta Baarlamaanka dhexdiisa waa ragii labadiblaha loo kala qabana jiray markay tuulooyinka iyo kaymaha geelasha lagu dhaqo dhex joogeen? Markaa maxaa isbedalay? Waxba. Qurbana soo meer meer, cinwaan aqoonyahana la sii, suudhna loo soo geli, laakiin “Dur dur iyo dabaal wuxuu maro geeli jire abidkii ma daahiro.” (Habeed wayne, “Maxaan cadydaa buu yidhi, waa mar aan hurdo iyo mar aan geel lajoogee.”)
Akhristoow, Shiidka iyo daanyeerayntu dani ugu ma jirto Soomaaliland; ku dayashada Reer Galbeedka iyo “Dimqoraadiyad” ku sheegta aad moodo inay dhaqankeenii iyo diinteena dhidibada usiibayso, waar hooy ka jooga: “Rag cayaayir iyo kibir caynwalba udhimaye…”
Arinta labaad ee ka yaabasay shacabka Soomaaliland ee maskaxda ka fayoow waa doorashada Madaxwaynaha ee isu bedeshay yooyantkii dumarka ka dhaxayn jirtay.
Hebelbaa madaxada Soomaaliya lakulmay xitaa haday dhabtahay wax qof lagu cambaareeyo si uu doorashada uu waayo ma ah. Waa sheeko dumar oo dhaqanka raga ku cusub. Waayo?
Madaxda Soomaaliland waxay lakulmaan kuwa Itoobiya, Kiiniya, Jabuuti, Carabta iyo wadamo kale oo badan. Wadamo badan oo ay madaxda Soomaaliland lakulmaan waxay ka soo horjeedaan qadiyada gooni isutaaga Soomaaliland. Taasina ceeb ma aha ee waa dhaqan siyaasadeed iyo argtidoo lagu kala duwanyahay. Markaa sidoo kale, wax udiidaya inay madaxada Soomaaliland lakulmaan kuwa Soomaaliya oo waxyaabo badani inaga dhexeeyaan majiro. Waxa kaliye oo aan gor gortan geli karin waa madaxbanaanida Soomaaliland. Hadba dawlada (Soomaaliland) ee talada haysa ayuun baa loo daba fadhiisanayaa.
Ragaay ku cusubtahay Photoshop, sawirada iyo fiidiyoow (video clips) la isu gee geeyay ee hadana raba inay Soomaaliland maamulaanoow, horta Ilaahay baa Soomaaliland umaqan laakiin waa ayaan daro inay ragaasi hawaystaan jagada Madaxaynaha. Haday caruurta shabakadaha (internet) wax soo gelisaa ku khaldi karaan, maxaad ka filaysaa sirdoon iyo siyaasiyiinta gaamurtay ee wadamada aynu deriska nahay ama caalamka? Adigoon xitaa ogayn ayaad jaajuus unoqonaysaa. Dhaq dhaqaaqa wejigaaga/jidhkaaga (facial expressions & body language) iyo hadalkaaga ayaa sirtaadoo dhan laga dhuuxi karaa. (Sir maqabe Allaa usahan ah; laakiin kursiga qaranka ma gayo inna Dhoohane.)
Waxaa la dinku dooranayaa:
1) Taariikhdaada, sumcadaada, wax qabadkaaga iyo aqoontaada soo jireenka ah. (Daawo abwaan fikirkiisa siyaasadeed ku cabiraya gabay https://youtu.be/OeVCCowLw5g )
2) Ficilka ay taageerayaashiinu ku kacaan: xumaan iyo samaanba. Markaa jirida clanka xisbi xanbaarsan ee cidii, “Aaboo Siyaad aabihii umadoow…” uqaadiwayda musharaxooda god madoow ugalayoow, waar kadaaya waxaad khayr moodo ayaa shar isubedelee; mudanaha iyo xisbigiinana lugta ha jiidina. Ninka maanta feedh iyo cagajulayn wax ku doonayaa, berina qori caaradii ayuu xalku raadin; taariikhduna waa been ma sheegto.
3)Qorshiihina shanto sano ee soo socda ayaa la idinku qiimaynayaa. Ee cidina idinku dooran mayso toorayda, munaafiqnimada, iyo sheeko Gaalada shaadhka Dimiqoraadiyada loo soo geliyay ee qaarkiin la wareegayaan.
Dhaqankii iyo diintiiba waa la dhaawacay. Xitaa madax dhaqameedyadii Soomaaliland ayaa siyaasdii ku milmay oo kudayday madax dhaqameedka Soomaaliya oo shirarka caalamiga ah ka qaybgala suulkana wax ku saxeexa. Madax dhaqameedkii tuuladiisa iyo beeshiisa lagu dhex ogaa, ayaa “shir jaraa id” ku qabta Hargaysa. Waxaa xusid mudan in boqorka beesha Gabooye uu ka shifay ceeb qoto dheer iyo madax dhaqameedkii Soomaaliland oo isubedelay madax qudhimeed. Taasina waxay hordhac utahay dhaqankii iyo kala danbayntii Somaaliland oo wadadii Soomaaliya kuburburtay cagta saaray. Bal markale indha haaga ku daalaco: https://youtu.be/UNT3cCmPHLc
(Xitaa dumarkii daaradahooda hortooda isugu tirin jiray ayaa iminka TV ga, facebook iyo youtube isumariyo wixii haween sir uahaan jiray! Ceebay tacaal! Alla maxaa sodoh facebook ga ku coodh coodhay!)
Gebogebo, siyaasiga Soomaaliland waxaan ku dooranayaa, taariikhda lama ilaabaan ka ah (ee xumaan iyo samaan ba leh) ee ku daba jiitamaysa, waxaad wadanka uqabtay intaad dawlada ka mid ahayd, aqoontaada iyo waayo aragnimadaada siyaasadeed, iyo qorshahaaga shanta sano ee soo socda hadaad kursiga qabsato.
Laakiin tola’ayeey, tolkay meeyay, laaluush, diin iyo dhaqan ku xadgudub iyo hebel baa madaxda Soomaaliya lakulmay waxay xaqiijinaysaa inaad tahay mid aan uqalmin jagada qaranka ugu saraysa, xitaa maad walaakay ama abahay ahaatid, iskaa daa cidkaloo. Waa qaranka dhis ee ma aha qabiilka iyo qoyska dhis. Mar marka qaar waxaan is waydiiyaa, “Waar dalkan dadkii lahaa miyay dhinteen?”
Short URL: http://somaliwayn.org/?p=50668